ओली-प्रचण्डलाई काउन्टर दिँदै माओवादी नेताहरुले ब्यूताए यु’द्धकालिन पार्टी, कसले गर्दैछ नेतृत्व ? — Sanchar Kendra
ओली-प्रचण्डलाई काउन्टर दिँदै माओवादी नेताहरुले ब्यूताए यु’द्धकालिन पार्टी, कसले गर्दैछ नेतृत्व ?
नेकपा एमालेसँग गरिएको एकताप्रति असन्तुष्ट पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पार्टी पुर्नगठन गरेका छन् । एमालेसँग गरिएको एकतालाई आत्मसमर्पणभन्दै उनीहरुले जनयु’द्धकालिन पार्टीलाई ब्यूताएका हुन् ।
एमालेसँग गरिएको एकता आफूहरुको लागि मान्य नभएको भन्दै बिमल अधिकारीको नेतृत्वमा ५१ सदस्यीय जनयु’द्धकालिन पार्टीको पुर्नगठन गरेका छन् । उनीहरुले पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नाम राखेका छन् । यो नाम जनयु’द्धकालिन माओवादी पार्टी हो ।
काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आइतबार घोषणा गरिएको पार्टीका संयोजक अधिकारीले जनयुद्धको नेतृत्वकर्ताले एमालेसँग आत्मसमर्पण गरेकै कारण आफूहरु अलग भएको बताए । पुष्पकमल दाहालले पार्टीलाई एमालेमा विलय गराएर जनयुद्धप्रति गद्दारी गरेको अधिकारीले बताए । उनले दाहाललगायतका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरुले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको कालो धनलाई सेतो बनाउन एमालेमा विलय भएको बताए।
“तिमीहरूका दिन पनि सकिसके अब तिम्रा अपराध र पापको एकएक हिसाब हुन्छ, हे नववादशाहहरु तिम्रा महलका कुर्सीबाट पछारेर जनताले तिमीहरूलाई सडकमा फुटबल खेल्ने दिन धेरै टाढा छैन” नयाँ पार्टीलाई शुभकामना दिन पुगेका पुर्नगठित माओवादी केन्द्रका नेता आलोक रायमाझीले भने । उनले दाहालसहितका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरु दलाल, पुँजीवादी, नोकरशाही र नवऔपनिवेशिक सरकारका धृष्टरास्ट्र, शकुनि, दुर्योधन र जनताका दुश्मनहरु भएको आरोप लगाए । उनले नेकपा अन्डरलाइनलाई दलाल र भ्रष्टचारीको जमघट भनेको छन् ।
नयाँ पार्टीमा पूर्वमाओवादी केन्द्रका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य छन् । नयाँ पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र पुर्नगठिन माओवादी केन्द्रसँगै क्रान्तिकारी माओवादीसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएको छ ।
यसैबीच पार्टी घोषणालाई शुभकामना दिँदै पुर्नगठित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश न. ५ का इन्चार्ज आलोक रायमाझीले एकतालाई अस्विकार गर्ने नेता कार्यकर्ताहरुलाई बधाई तथा स्वागत गरे ।
‘कलियुगको महाभारत अब सुरु भइसकेको बताउँदै महाभारतको युद्धमा पूर्व कमरेड प्रचण्डले कृष्णलाई नरोजेर, फौजलाई मात्रै रोजे, हामीले फौज नरोजेर केबल कृष्णलाई रोज्यौं’ रायमाझीले भने । उनले कृष्ण भनेको बिचार, सिद्धान्त र समयको अपरिहार्यता भएको बताउँदै जित निश्चित भएको दाबी गरे ।
‘तिमी कौरबहरुसँग अहिले षड्यन्त्र र आपराधिक मानसिकताले भरिएको जत्था र फौज दुबै ठुलो छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै रायमाझीले भने -‘हामी पाण्डबहरु संग बिचार, सिद्धान्त, निष्ठा र जनताप्रतिको लगाव छ, त्यसैले पनि जित हाम्रो पक्का छ।’ उनले एमालेमा गएका माओवादीहरु सत्तामा गएर अरबौं भ्रष्टाचार गरेको बताए ।
उनीहरु भ्रष्टाचार गरेर कमाएको कालो धनलाई सेतो बनाउन एमालेमा विलय भएको रायमाझीको अारोप छ । उनले पूर्व माकेका नेताहरुले गरेको अपराधको हिसाब किताव गर्ने चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले नेतृत्वकर्ताले नै जनयुद्धको मूल्य मान्यतालाई एमालेकरण गरेकोले अाफूहरुलाई एकता स्वीकार्य नभएको बताए । उनले अाफूहरु नयाँ शिराबाट जनयुद्धका मूल्य मान्यताअनुसार अगाडि बढ्‍ने बताए ।
यस्ताे छ माओवादीको प्रेस बिग्यप्ति